Mogadishu Journal » Dowlada oo lacag la’aan lasoo daristay kadib markii laga jartay Dhaqaalihii lagu kabi jiray
Dowlada Soomaaliya ayaa waxaa soo wajahday dhaqaalo daradii ugu xumeyd mudooyinkan, kadib markii qaar kamid ah dowladihii dhaqaalaha ku taageeri jiray ay ka jarteen lacagihii ay ku kabi jireen miisaaniyada dowlada.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Xil-gaarsiinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, ayaa qiray in qaar kamid ah dowladihii taageeri jiray ka jarteen dhaqaalihii miisaaniyada dowlada lagu kabi jiray taasina ay ka dhalatay dhaqaalo daro baahsan.
Waxa uu sheegay Wasiirka in lacag kab ah oo dowlada la siin jiray laga jartay bishii Agoust ee sanadkii hore, waxa uuna xusay in malaayiin Dollar ah ay siiyeen dowladaha Sacuudiga iyo Qatar iyana ka dhamaadeen dabayaaqada sanadkii hore.
“Kabkii nala siin jiray waxaa nalaga jaray Agost, Sacuudiga oo lacag noogu deeqayna waxay naga dhamaatay December, Qatar waxa ay nasiisay xoogaa weyna dhammaadeen, marka maanta waxa aan ku soconaa sagxadda” ayuu yiri Wasiir Beyle.
Wasiirka Maaliyadda Xukuumada Xil gaarsiinta ayaa ka codsaday shacabka Soomaaliyeed in ay isku tashadaan ayna dhaqaale ku taageeraan dowladooda, waxa uuna xusay in Madaxweynaha iyo R/wasaaraha shacabka ka codsan doonaan in dhaqaale ku taageeraan.
Qaar kamid ah dowladaha caalamka ayaa dowlada ka jartay dhaqaalihii ay ku taageeri jireen kadib markii dowlada ku guul dareesatay in ay qabato doorasho sidoo kale dowlada sameesatay mudo kororsi wadamada Caalamka kasoo horjeesteen.